Dhamma Gift: October 2012
လယ်တီဝိပဿနာ တရားစခန်း ဖိတ်ကြားစာ
ရန်ကုန်မြို့၊ စန်းချောင်း၊ လယ်တီဝိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား
စခန်းကို လစဉ်လတိုင်း လပြည့်နေ့မှ လပြည့်ကျော် (၈) ရက်
နေ့အထိ (၇) ရက် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိပါသည်။
လယ်တီဝိပဿနာ ပြန့်ပွားရေး ဗဟိုအဖွဲ့ချုပ် ဩဝါဒါစရိယ
ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နာယကမှာ လယ်တီဒီပနီ ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး
အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒွိပိဋကဓရ ဒွိပိဋကကောဝိဒ အဂ္ဂမဟာ ဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာ
စရိယ ဘဒ္ဒန္တ ဇာဂရာဘိဝံသ မဟာထေရ်မြတ် ဖြစ်ပါသည်။
စမ်းချောင်း၊ လယ်တီဝိပဿနာ တရားစခန်း၊ ရန်ကုန် ၏
ဓမ္မာစရိယ အရှင် ကောသလ္လ၊
ဓမ္မာစရိယ အရှင် တေဇနိယ၊
ဓမ္မာစရိယ ဦးလှကို တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ယောဂီသူတော်စင်များ ဇာတိဓမ္မ၊ မရဏဓမ္မ၊ အနိစ္စဓမ္မ၊ သမ္မာ
ဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ကို နေဆဲတိုင်း ပွားများလိုခြင်း၊ ပွားများဖြစ်ခြင်းအကျိုး
အမှတ် ၁၃၇ (က) ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း_ ၉၅-၁- ၅၃၄၃၂၉၊ ၉၅-၁- ၆၅၁ဝ၆၄၊
Labels: Vipassana Invitation
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့၊ ဝိဇ္ဇာညီနောင်စေတီ ဖက်စုံပြု ပြင်နိုင်ရေး
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊
တွံတေးမြို့ ရွှေဆံတော်ဘုရားကြီး၏ အနောက်ဘက်ရှိ ဝိဇ္ဇာညီနောင်စေတီတော်သည်
တွံတေးမြို့နယ် လယ်တီ ဝိပဿနာ တရားစခန်း အတွင်း၌ တည်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ
စေတီတော်ကို ဖက်စုံပြုပြင်နေသည့်အပြင် စေတီတော် အနီးရှိ မြေကိုလည်း
"သာသနာ့မြေ" အဖြစ် ဝယ်ယူလိုပါသည်။ မြေ တစ်ဧက ရှိပါသည်။
စေတနာရှင်၊ သဒ္ဓါရှင် ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ မှ သာသနာပြု ကုသိုလ်ထူးကို ရယူ
လှူဒါန်းကြပါရန် နှိုးဆော် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ဓမ္မာစရိယ ဦးသန်းခင် (လယ်တီကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ)
၁၉၊ နီလာလမ်း၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဆရာလေး ဒေါ်ယုသိင်္ဂီ
လယ်တီ ဝိပဿနာ တရားစခန်း၊ မြို့ပတ်လမ်း (ရှမ်းရွာကြီးအနီး)၊
ကဠာယမုဋ္ဌိဇာတ် / U Sumangala (Daeou Sayadaw) Mandalay, Oct 2, 2006.
Explaining how present time is the most valuable one and urging to practise insight knowledge immediately with reference to "Kalayamutthi Jataka". Listen more
ဂဝေသီသုတ် / U Sumangala (Daeou Sayadaw) Mandalay, Oct 3, 2006.
Description of merit, demerit and the highest Panna with reference to "Gavesi Sutta". Listen more
စုတိ ပဋိသန္ဓေ နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်းတရားတော် / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Nov 27,1959.
Indirect and direct causes to attain Nibbana; observing Vedananupassana; the works of Noble Eightfold Path.
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၄) / Ashin
Janakabhivamsa (Chanmyay Sayadaw) Yangon [no date]
Manifestation of the most auspicious sign_Great learning and skill in work, giving the stories of 1.awise merchant, 2. the wise carpenter of the King Bodhi and 3. the man who was skillful in throwing stones to things and made different shapes as examples. Listen more
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၅) / Ashin
Explaining the three most auspicious signs which include: 1.ahighly trained discipline, 2. well-spoken speech and 3. looking after one's mother and father. Listen more
သက္ကပဥှသုတ် အဆက် တရားတော် / U Dhammasara
(Hsinphyukyun Sayadaw) Jul 24, 1990.
Described: Satipatthana Bhavana Magga; necessary Adhipati in practising insight knowledge; Eissa and Micchariya that invite dangers. Listen more
သက္ကပဥှသုတ် အဆုံးသတ် တရားတော် / U Dhammasara
Mentioned: the causes of Eissa and Micchariya; love and hatred; desire (Chanda) and reflection (Vitek); Papanca (Tanha, Ditthi, Mana); types of_Chanda,Vitek and Vedana; observing Vedana. Listen more
အရှုံးမရှိသော ဒဿန/ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် ဘာသာရွေးနည်း / Ashin Javana (Metta Shin) Yangon, 1367 B.E.
Choosing the right religion; worshipping Tri-ratana (the Buddha, the Dhamma and the Sangha). Listen more
အာသဝေါတရားလေးပါး တရားတော် / U Vimala (Mogok Sayadaw) Mogok, Dec 4, 1959.
Description of Asava that make continuous Dukkha; balancing Indrias ( Viriya-Samadhi, Saddha Panna, Sati) giving Bhikkhu Sona as an example. Listen more
အန္ဓသုတ် / Ashin Javana (Metta Shin) Yangon, 1367 B.E.
How human's life is short; the essential Panna; two kinds of blind person; advice to beavirtuous person; charac-teristics of Sotapanna. Reference_"Anda Sutta'.